MCOTY 2019 Jury ၂၀၁၉ မြန်မာ့တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးကားဆုပေးပွဲအတွက် ဒိုင်လူကြီးများ - Drive Myanmar
Drive Myanmar > News > News > Local Updates > MCOTY 2019 Jury ၂၀၁၉ မြန်မာ့တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးကားဆုပေးပွဲအတွက် ဒိုင်လူကြီးများ
MCOTY 2019 Jury ၂၀၁၉ မြန်မာ့တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးကားဆုပေးပွဲအတွက် ဒိုင်လူကြီးများ
အကောင်းဆုံးကားတွေကို ဆုပေးရွေးချယ်ရာမှာ အတွေ့အကြုံရော စိတ်အားထက်သန်မှု နှစ်မျိုးစလုံးရှိတဲ့ ဒိုင်တွေကို လိုအပ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ခုနှစ်မြန်မာတစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးဆုပေးပွဲ(MCOTY-2019)ရဲ့ အကဲဖြတ်မယ့်ဒိုင်တွေထဲမှာတော့ ပြည်တွင်းမှ ဒိုင်(၄)ဦးနဲ့ နိုင်ငံတကာမှ ဒိုင်(၃) ဦးအထိ ပါဝင်ပါတယ်။
ပြည်ပကျွမ်းကျင်ဒိုင်များမှာ ပြည်တွင်းဂျာနယ်လစ်များနဲ့ ကျွမ်းကျင်သူများကို လမ်းညွန်ရန်နှင့် အထောက်အကူပြုရန်အတွက် နိုင်ငံတကာ အတွေ့ကြုံများကို ယူဆောင်လာကြသူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Selecting the best cars requiresajury of both experienced and passionate jurors. The jury of Myanmar Car of the Year – MCOTY 2019 – consists of4locals experts and3foreign. The foreign experts comes from different countries to bring in their international experience to coach and support our local journalists and experts.
နိုင်ငံတကာမှ ဒိုင်လူကြီးများ / Foreign Journalists
Ashwin Ram N P – Road Tester and Photographer for www.RushLane.com
Dao Trong Anh – Driving tester and Photographer for www.Autovina.com
Zotmund Pal – Automotive Reporter, AutomotorTV
ပြည်တွင်းဂျာနယ်လစ်ဒိုင်လူကြီးများ / The local journalists are
မိုးကန်ရှိန် Moe Kan Shein, Former Editor-in-chief at Automobile Entertainment
သန်းထိုက်သူ Than Htike Thu, Chief Editor of Myanmar Post and Myanmar Post Global
ကျော်ကျော်မင် Kyaw Kyaw Min, Chief Editor of Drive Magazine
ဒီနှစ်မှာတော့ ကားနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စိတ်အားထက်သန်သူတစ်ဦးကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ / And this year we have also invitedacar enthusiast
Ma Lai Lai Aye
SMART ၏ မျိုးဆက်သစ် All – electric For Two နှင့် For Four တို့ ထွက်ရှိခြင်း
NEXT 04 Oct 2019
The Nominated cars for MCOTY 2019 ၂၀၁၉မြန်မာတစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးကားဆုပေးပွဲအတွက် အဆိုပြုထားသည့် ကားများ